Sida loo kordhiyo darajadaada oo aad ufirirtid qiimaha adoo isticmaalaya Amazon Rank Tracker?
Seeraha muhiimka ah ee muhiimka ah ee Amazon waa barnaamij software oo faa'iido leh kaas oo loogu talagalay inuu ka caawiyo webmasters inay ku tartamaan mashruucan ganacsiga. Waxay siisaa fursad ay ku dhiirrigeliso alaabooyinka Amazon in dukaamada maalinlaha ah aaneyna kordhin mugga iibka.
Waa inaad si joogto ah u isticmaashaa qalabkan si aad u hagaajisid joogitaankaada calaamaddaada Amazon. Waa inaad si joogto ah ula socotaa ereyada muhiimka ah ee laguu dajiyey si aad u ilaaliso oo aad u xoojiso jagooyinkaaga. Qalabka Amazon tracker wuxuu qaadaa dhammaan dhibaatada ka dib by automating geeddi-socodka booska keyword raadinta. Waxaad u baahan tahay inaad wakhti badan ku qaadato ereyada muhiimka ah ee ereyada iyo raadinta xogta. Dhammaan tallaabooyinkaas ayaa si toos ah loo samayn doonaa muddo gaaban. Amazon tracker ayaa hubiya darajooyinkaaga dhowr jeer maalintii, adiga oo ku siinaya macluumaadka ugu muhiimsan oo la cusbooneysiiyey. Tusaale ahaan, haddii aad ogtahay meesha qiimeyntaada ay tahay ka dib waxaad ku shaqayn kartaa hoostooda hoostooda. Ama haddii aad horey u heysato booska ugu sarreeya ee Amazon SERP, waxaad ka shaqayn kartaa darajada ereyga raadinta oo kale, sii kordhaya fursadaha alaabtaada oo muujinaya natiijooyinka raadinta.
Taasi waa sababta adigoo isticmaalaya qalabka raadraaca ee Amazon, waxaad mar walba noqon doontaa hal talaabo ka hor tartamadaada.
Maxay yihiin faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee tracker ee raadraaca Amazon?
Haddii aad jeceshahay inaad ku guuleysatid Amazon, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sheygaaga hadda booska. Macluumaadkani wuxuu kaa caawin karaa inaad hagaajiso darajada boggaaga Amazon iyo inaad soo jiidato macaamiisha aad u badan ee calaamaddaada.
Waxaad arki kartaa isbeddelka kudhexaadinta
Isbeddel kasta oo ku jira taxanaha ayaa muujinaya in wax ka dhaceen magacaaga. Waxay noqon kartaa mid hoos u dhac ah ama kor u kacay taxanahaaga Amazon oo aad ubaahan tahay inaad si degdeg ah uga jawaabtid. Amazon rank tracker wuxuu ku siinayaa dhammaan xogtaas oo kuu ogolaanaya inaad qaadato tallaabo la beegsado si aad u hagaajisid xaaladdaada darajooyinka isla markiiba. Tarjumaada shuruudaha cusub
Qalabkan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto shuruudaha raadintaada cusub ee nidaamka oo ay qiimeeyaan awooddooda si loogu beegsado liiskaaga Amazon. Amazon ranking tracker ku tusi doonaa mugga raadinta luuqad kasta oo la raadinayo, oo ku siinaya fursad aad ku go'aamiso haddii ay habboon tahay in bartilmaameed ama aan. Mugga raadinta sare ee erayga muhiimka ah ee lagu bartilmaameedsanku wuxuu muujin karaa labadaba - tartan aad u sareeya iyo caan ka mid ah dadka isticmaala. Sida caadiga ah, waa arrin aad u adag in lagu daro heerarka sare ee keywords keywords, waxaana laga yaabaa inaad ka fiicnayd inaad bixiso dareenkaaga shuruudaha tartan yar oo sidoo kale kuu keeni kara TOP ee natiijooyinka raadinta.
Samee falanqayn tartan hal guji
Tani waxay u saamaxdaa ganacsatada Amazon in ay raadiyaan tartamayaasha keywords keywords. Waxaad ku dari kartaa mid ka mid ah ereyada muhiimka ah ee ku tartamaya tartamayaashaada, isbarbardhigiina isla midkiina adoo eegaya sida ay u kala sarreeyaan. Haddii aadan si sax ah u ogeyn ereyada muhiimka ah ee ku tartamaya tartamayaashaada, waxaad hubin kartaa astaanta alaabta iyo sharaxaadda Source .